book | ဇော်မျိုး
ကျွန်တော် Android Application အခြေခံေ၇းသားနည်း ဆိုတဲ. စာအုပ်လေးတင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဖုန်း Application တွေကိုေ၇းတာ ၀ါသနာပါတဲ. သူတွေအတွက် ဒီစာအုပ်လေးက လေ.လာဖို. အထောက်အကူ ပြုပါလိမ်.မယ်။
Filed under book Tagged with Mobile
ကျွန်တော် ကကကွန်က ထုတ်ပြီးသမျှ နည်းပညာ အကြောင်း မြန်မာလို စာအုပ်များ ဒေါင်းလို. ၇တဲ. လင်.လေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီလင်.လေးမှာ စာအုပ်ပေါင်း ၁ရ အုပ်ကို တစ်စုတစ်စည်းထည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းမယ်ဆို၇င် ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ. စာအုပ်နာမည်လေးကို နှိပ်လိုက်၇င် ဒေါင်း၇မဲ.နေ၇ာကို ရောက်သွားပါလိမ်.မယ်။ စုစည်းထားတဲ. စာအုပ်တွေကတော….
စာအုပ်တွေ စုစည်းပေးထားသူကတော. မြန်မာမိသားစု ဖို၇မ်က ကိုသန့်ဇင်ဌေး ပါ။
(***Mediafire လင်.ကပဲ ဒေါင်းလို.၇ပါမယ်***)
Filed under book Tagged with ကကကွန်
ကျွန်တော် iPhone အသုံပြုနည်း စာအုပ်လေး တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေး ကိုဖတ်ပြီး မိမိ ဖုန်းနဲ. ပက်သက်ပြီး သိသင်. သိထိုက်တဲ. အကြောင်းအ၇ာလေးတွေ များစွာကို သိ၇တာပေါ.။ iPhone အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို. ထင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ အနေနဲ. ဖတ်ကြတာပေါ.ဗျာ။
Credit : http://nadithanlwin.minus.com
Filed under book Tagged with phone
ကျွန်တော် USB နဲ.ပက်သက်သမျှ အသေးစိတ် ရေးထားတဲ. စာအုပ်လေးတင်ပေးချင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း USB Stick or Memory Stick သုံးကြတာများပါတယ်။ USB Stick သုံပြီဆိုတော. ပြသနာ အနည်းနဲ. အများတော.ကြုံတွေ.၇မှာပါ။ ဒီလိုကြုံတွေ.၇မဲ. အခက်အခဲ လေးတွေကို ဒီစာအုပ်လေး ဖတ်ပီး ဖြေရှင်းကြတာပေါ.။
ရေးသားသူ – ကိုစံငြိမ်း (မြန်မာမိသားစု)
ဖိုင်ဆိုဒ် – 135KB
Filed under book Tagged with USB
ကျွန်တော် အသွားများတဲ. ၀က်ဆိုဒ်တွေကို စာ၇င်းပြုစုပြီး စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်.ဆိုဒ်လာကြည်တဲ.သူတွေ အင်တာနက်မှာ မြန်မာလိုေ၇းထားတဲ. ၀က်ဆိုဒ်တွေ အဆင်ပြေပြေ နဲ. အလွယ်တကူ ၇ှာလို.၇အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ေ၇းထားတဲ. ၀က်ဆိုတွေက အခု အချိန်အထိ Update ဖြစ်နေတဲ. ၀က်ဆိုဒ်တွေပါ။
Filed under book Tagged with internet
Internet & E mail အသုံးပြုနည်း…….
Internet & Email အသုံးပြုနည်း
ကျွန်တော် အင်တာနက်နှင်. အီးမေး အဆင်မြင်. အသုံးပြုနည်းများ စာအုပ်ကို တင်ပေးချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြု လိုသူတွေဖတ်သင်.တဲ. စာအုပ်ပါ။ သုံးပုံသုံးနည်းကို ပုံနှင်. တကွ ၇ှင်း၇ှင်း လင်းလင်း ဖော်ပြပေးတဲ. အတွက် အလွယ်တကူလေ.လာလို.၇ပါတယ်။
ေ၇းသားသူးသူ၇အောင် (B.C.Sc)
ဖိုင်ဆိုဒ်း15MB
အင်တာနက်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါစေ…..
ကိုယ်တိုင်လေ.လာ JAVA သင်ခန်းစာ…..
လွယ်ကူလေ.လာ JAVA သင်ခန်းစာ
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လေ.လာ JAVA သင်ခန်းစာ ဆိုတဲ. စာအုပ်လေးတင်ပေးချင်ပါတယ်။ JAVA Programming ကို စိတ်ဝင်စားတဲ.သူတွေအတွက်
မြန်မာလိုလေ.လာလို. ၇အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလို တစ်ဆင်.ချင်း အခြေခံကနေ ရှင်းပြထားတဲ. အတွက် တော်တော် ကောင်းတဲ. စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ။
ေ၇းသားသူ – ဒေါ်အေးအေးလှိုင်
Credit : keekee
Filed under book Tagged with Programming